Kuyini Social CPX, WebtalkUhlelo olukhulu lokubambisana oluhle kakhulu? - 💌 WebTK - Isitifiketi sakho kuya WebTalK 🚀 Mema, Buyekeza, Izindaba nokuningi 🔥
Webtalk ufuna ukusiza wonke umuntu axhumeke ematheni amaningi futhi abe yimpumelelo enkulu yingakho Webtalk ukhokhela ku-50% yazo zonke izimali ngenhlelo yokudlulisela imali ebizwa kakhulu Social CPX.
Webtalk'Izimbangi ezinkulu kakhulu zokuxhumana ze-inthanethi nezincintisana ze-e-commerce zikhiqiza amashumi ezigidigidi zamaRandi minyaka yonke ukukhangisa, ukuphuculwa kwe-premium nezimali zokuthenga.
Facebook kanye ne-LinkedIn ngokwesilinganiso bakhiqiza u- $ 3 njalo ngenyanga kusuka kumsebenzisi ngamunye. I-Amazon ikhiqiza cishe ama- $ 70 umsebenzisi ngamunye ngenyanga kusuka ekuthengisweni komkhiqizo.
Njengomphakathi wokuqala wezenhlalo e-commerce, Webtalk amaphrojekthi afinyelela ku-$ 10 noma ngaphezulu ngenyanga kusuka kuwo wonke umsebenzisi.
Webtalk yakha imali evela ukukhangisa ukuthengisa, ukuthuthukiswa kwesici se-premium, izixazululo zethalente nezimali zokuthenga njengabanye kepha umehluko ngukuthi: sabelana nawe.
WebtalkUkuthuthukiswa kokubhaliswa kokubhaliswa kwe-premium kufaka phakathi ukushayela kwe-premium nokuxhaswa kwengxoxo bukhoma, ukuhlangabezana nesevisi yokuhlangana yangempela futhi Webtalk Ukubhaliswa kwesici okukhethekile, starukuthanda okungaphansi kwe- $ 15 ngenyanga.
The Webtalk Ukubhalisa kwe-Pro kuhlanganisa ikhono lokungaxhunyiwe komlayezo, bona abantu ababuke iphrofayela yakho, thola abantu abatholakalayo ukuqasha, sesha ngobulili nobubanzi bominyaka, ngisho nendawo yokugcina yesitoreji samafayela abucala.
Amabhizinisi angasebenzisa Webtalk ukuqhuba imikhankaso yokukhangisa yokuphromotha kusisekelo sekhomishini, ukuthenga isikhala sesikhangiso noma ukusetshenziswa Webtalk's premium talent yokuqasha amasevisi ukusiza ukukhulisa izinhlangano zakho.
Uma ubhalisa ohlelweni lokusebenzisana samahhala uzothola ikhomishana ye-10 kuyo yonke imali eyakhiwe ngabasebenzisi namabhizinisi ozobheka kuwo Webtalk impilo.
Ukubhekwa kwakho kwesikhathi eside okumele kube khona ukubhekwa komsebenzisi kulinganiselwa ku-$ 1 ngenyanga.
Sonke siyazi ukuthi i-$ 1 ayishintshi impilo Webtalk uthathe isinqumo sokwenza okungacabangi futhi unikeze wonke umuntu udumo ngaye starukuzwa ukusabela okuxakekile kokudluliselwa.
With Webtalk uthola isikweletu ngokudluliselwa kwakho okuqondile kodwa futhi nokudluliselwa kwawo nokudluliselwa kwawo nokunye okuqhubekayo ngokusebenzisa ama-degrees okuhlukanisa.
Ake sithi ikhomishana yenyanga ngayinye yokudluliselwa kwayo ifinyelela ku-$ 1 futhi wena nabo bonke abathunyelweyo baye babhekisela abasebenzisi abangu-10 ngamunye futhi uyaqhubeka ngamadireji amahlanu noma amazinga okuhlukana.
Ungathola i-$ 10 ngenyanga kusukela ezingeni lakho lokuqala, $ 100 kusuka okwesibili, i-$ 1000 kusuka kweyakho yesithathu, i-$ 10,000 kusuka ku-okwesine ne-$ 100,000 ngenyanga kusukela ngezinga lakho lesihlanu.
With WebtalkUhlelo lokuxhumana olulula lu "ngilandele Webtalk”Kuthunyelwe Facebook noma i-Twitter ingashintsha impilo.
Ingxenye engcono kakhulu mayelana nehlelo lokubambisana akudingeki ushintshe noma yiziphi izinhlelo zakho zansuku zonke.
Yonke inethiwekhi yezokuxhumana ikunika iphrofayli noma isixhumanisi sekhasi ozokwabelana ngazo nokwakha inethiwekhi yakho.
Webtalk kwenza okufanayo kangcono.
Uma ukuxhumana kwakho kwephrofayela kuqhuba abasebenzisi abasha Webtalk Uhlelo lwethu lokubambisana olulungelo lobunikazi lunikeza isikweletu ngokudluliselwa.
Ngenisa izincwadi zakho ze-imeyili noma zekheli lefoni ukumema oxhumana nabo ukuthi baxhumane nawe Webtalk futhi uzothola isikweletu kuwo wonke umuntu ojoyina.
Yabelana ngezithombe zakho, amavidiyo namafayela nabangewona amalungu futhi uthola isikweletu ngokudluliselwa lapho bhalisela ukubabuka.
Uma unayo iwebhusayithi noma ibhulogi, Webtalk inikeza izinkinobho zomphakathi kanye nezikhangiso ze-banner ukuze zibonise izivakashi zakho zesikhangiso futhi uma lezi mathuluzi ziqhuba abasebenzisi abasha onikezwe isikweletu ngalabo abathunyelwe.
Social CPX is WebtalkUhlelo lwe-standalone lokudlulisela elikunikeza ideshibhodi yeselula ehamba phambili elandelela konke okudluliselwe kwakho okunikezwa kunoma yimiphi imisebenzi yakho yomphakathi.
Ungabuka ukuthi zingaki izimemo ozithumele, ukuthi bangaki abantu abajoyine Webtalk ngiyabonga kuwe, inani lemali engenayo abaye bakhiqiza kanye namakhomishini wakho.
Webtalk olunye uhlelo lokudluliselwa kokuhlanganyela lukhululekile futhi luzoba njalo.
Abantu namabhizinisi Ujoyine Webtalk ekuqaleni futhi usize ukukhulisa umphakathi uzothola ithuba elikhulu lokuthola imali.
Namuhla kune-2 abasebenzisi bokuxhumana benethiwekhi emhlabeni wonke kanye nenani elihloselwe ukuphindwa kabili eminyakeni emihlanu ezayo.
Abantu abaningi owamema kuwo Webtalk manje amathuba akho angcono kakhulu empumelelo yokushintsha impilo.
You ngalutho nakho konke ukuze athole.
Joyina manje bese umeme wonke umuntu omaziyo ngaphambi kokumemema.
Webtalk: indlela engcono kakhulu yokuxhumana nokudala impumelelo.
Ukubuka kuqala kokubukhoma Social CPX by Webtalkumsunguli
Joyina Webtalk Manje futhi Start Ukwakha Inethiwekhi Yakho
Kugcine ukubuyekezwa April 2, 2019
Izigaba Mayelana Webtalk Amathegi kokujoyina, Amamodeli eBhizinisi, Ukumaketha kwe-Digital, Facebook, LinkedIn, Marketing, Izinhlelo zokusebenza, Ukumaketha kokudluliselwa, ezokuxhum, Izinsizakalo zokuxhumana nabantu, test, Izinhlelo zokusebenza ze-Universal Windows Platform, Iwebhu yomhlaba jikelele Shiya amazwana Imeyili kwemikhumbi
Ikhaya - Mayelana Webtalk - Kuyini Social CPX, WebtalkUhlelo olukhulu lokubambisana oluhle kakhulu?